U-Elisabeth - Ikhasi 3 - I-International Writing Centres Association
September 18, 2020 September 18, 2020 Elizabeth Ukukhangisa
Usuku: Septhemba 30, 1: 30-2: 30pm EST
Abethuli: ULauren Fitzgerald noShareen Grogan
Uhlelo lwe-IWCA Mentor Match Program Webinar Series
Sonke siyazi ukuthi lezi yizikhathi ezinzima zezikhungo zokubhalela kanye nabantu bebonke. Kepha futhi sidinga ukuqhubekela phambili. Sikwenza kanjani lokho? Sizoqala ngocwaningo ngokubonga bese sixoxa izindaba ngezinsizakusebenza (kwesinye isikhathi okunomkhawulo kakhulu) nezimpahla okufanele sakhe kuzo. Abahlanganyeli bazokhuluma emakamelweni okuphumula engxenyeni yesibili yehora. Inhloso yethu ukunikeza ithemba nokwakha umphakathi.
Wonke amalungu e-IWCA amukelekile ukujoyina, ngakho-ke sicela ukhululeke ukumema abangani bakho. Lesi yisikhathi sokufika nokuhamba; uma ungaya kuphela engxenyeni ye-webinar, wamukelekile ukujoyina nathi.
Sicela uxhumane noMolly Rentscher (mrentscher@pacific.eduukuthola eminye imininingwane.